Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda Kaaramardha (The Karamarda Group) maxay ka yidhaahdeen Wadahadalkii fashilmay
Kooxda Kaaramardha (The Karamarda Group) maxay ka yidhaahdeen Wadahadalkii fashilmay
Maqaal aad u xiisa leh oo cinwaan looga dhigay – Wada-hadalkii dhicisoobay ; Saadaasha Gobolka Somalida iyo ONLF ( Failed Negotiation ; the prospect of Somali Region and ONF) – ayay kooxda Kaaramardha (The Karamarda Group) u soo bandhigeen akhristaayshooda.
Maqaalkan ay Kooxda Kaaraamardha soo qoreen waxay ku tilmaameen xaaladda ka jirta dalka Ogadenya ama siday qoreen (Somali Regional State SRS) mid u dhiganta xaaladihii uu ka sheekeeyay qooraagii caanka ahaa George Orwell ee sii saadaaliyay caalamaka wuxuu ku dambayn doono marka la gaadho 1984. Sheekada uu qoray George Orwell (1984) ayuu ku saadaaliyay in caalamka ay xukumi doonaan wuxuu ku tilmaamay Big Brother oo argagixis iyo cabudhin wax ku xukumaya iyo dhamaan dadweynaha inay is-wada jaajusayaan iyadoo kaamirado laga daawanayo ay meel walba ku xidhan yihiin oo cidna aanay lahayn xoriyad ay ku fikirto ama ku doorato waxay doonto. Waxay ku tilmaameen in dadka shacabka ah ee ku dhaqan SRS ay ku noolyihiin cabsi joogta ah oo dhamaantood ay xukuman yihiin iyagoon loo aabayeelin rag iyo dumar midkuu yahay, da’diisa, ama siyaasadda uu aaminsan yahay toona.
Markay ka faaloonayeen Kooxda Kaaramardha arimaha shirkii wadahadalka ku dhexmaray Jabhadda ONLF iyo Dawladda Itobiya dalka Kenya iyo siyaabuhuu u burburay waxay ku soo ururiyeen 5an qodob oo dhaxagal ah;
• Wafdigii Itobiya matalayay oon daacad ka ahayn wadahadalkaa lagu guulaysto . (The Ethiopian government representatives were not prepared to negotiate in good faith ..)
• Itobiya oon lahayn kala dambayn muuqata ka dib markuu dhintay Meles Zanawi oo ahaa nin awood badan waxna ka go’aan. ( Meles Zenawi Asres the most powerful man in Ethiopia has left the country without any meaningful structural chain of command..)
• Wafdiga Itobiya oo ka koobnaa gabai ahaantii Wasaaradda Gaashaandhiga iyo Sirdoonka Ciidanka oon dan ka lahayn isbadal inuu ka dhaco gobolka Somalida. (The Ethiopian delegation team was entirely from the Defense Minister and military Intelligence personnel whom have the least interest in any change in the Somali region..)
• R/Wasaaraca cusub oo ka soo jeeda Qawmiyadaha Koonfureed oon ka dhalan Qawmiyaga Tigreega ee xooga dhaqaale iyo siyaasadba gacanta ku haya. (The new prime Minster who hails from Southern Nations and Nationalists is not from the Tigary Region where currently all political and economic power remain on hand..)
• M/weynaha maamulka gobolka oon lagala tashan isla markaana aan wax door ah ku lahayn wadahadalka, iyadoo waliba la sheegayo inay ONLF u cadaysay dawladda Kenya in qof ka socda maamulka Somalida aanay la hadlaynin. (The Somali Region administration was not consulted nor had any role in the negotiations process, in fact, it has been rumored that the ONLF made it clear through the Kenyan government that no Somali regional representative would be part of any talks..)
Sikastaba ha u dhigeene, waxaad moodaa inay baadhitaan dhab ah ku sameeyeen asbaabihii fashiliyay wadahadalka, taariikhdana ay sugi doonto waxyaabo laga yaabo inay ka qarsoon yihiin oo dib ka soo biixi doona.
Maqaalka oo aad u xiisa badan, waxaa kaloo ka mid ah qodoabada xusuus-reebka ah, arimaha ku saabsan sida maamulka Cabdi Iley ay ugu farxeen wadahadalka burburay, oo Karamardha Group ay sheegeen inay isaga iyo Jenenada dagaal-oogayaasha ah iska kaashadeen burburinta wadahadalka. Waxay qoreen inay abaabuleen Cabdi Iley iyo Jenanadaasi waxay ku tilmaameen riwaayad murugo leh iyagoo dadweynaha isugu keeney Jigjiga say u muujiyaan inay ku faraxsan yihiin xasilooni darada iyo dhibaatada haysata. (.. As always, the lunatic president of the SRS Abdi Mohamed Omer organized public stage of humiliation and shaming.)
Waxaa kaloo mudan in la’is dul-taago urursiga dadka qurba joogta ah ee fursad gaadka ah ee doonaya inay lacagta dagdag ah ka helaan Cabdi Iley. Waxayna tusaale u soo qaateen Doolaal oy yidhaahdeen wuxuu ahaa fursad gaad doonaya lacag dagdag ama ay indha-tireen neceyb uu u qabo ONLF. (.. To cement his projects, he will always find one or two respected members of the society such as Dolal Aden, lured by opportunistic desires of quick cash and power or blinded by ONLF hatred.)
Ugu dambayn waxaan si gooni ah u soo qaadan doonaa oon uga faaloon doonaa talooyinka ay aqoonyahanka isugu tagay Kooxda Kaaramardha (Karamardha Group) ay u soo jeediyeen ONLF iyagoo ugu baaqay inay raadiyaan taageerada ay uga baahan yihiin dhamaan Somalida oy noqdaan Jabhad lagu wada dhan yahay .. (Today, more than any time, ONLF needs to review itself and take a bold action to get the support it desperately needs from all Somalis who are living under the same tyranny and dictatorship.)
Qodobkaa ayaa u baahan in si fiican loo shiilo, iyadoo lala kaashanayo taxanaha taariikhda halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya, dhismaha ururada gobanimadoon, hardanka ka dhexeeya shacabka gobanimadoonka ah iyo gumaysiga, dhibaatada aan la koobi karin ee ciidamada gumaysiga ay u gaystaan shacabka gobanimadoonka iyo natiijada ka dhalata, iyo arima badan oo la xidhiidha. Qodobkan ayaan si gaar ah u abaari doonaa.
Kooxda Kaaraamardha (Karamardha Group) waa muwadiniin u dhashay siday yidhaahdeen – Somali Regional State – oo daneeya in dimoqraadiyad iyo dawlad wanaagsan ay ka dhalato halkaa. Waxaa laga yaabaa inay ugu muuqato in badan wax yaroon ka soo qaad lahayn ama ah waaqica jira ah (as an existing de-facto ) in la yidhaahdo –Somali regional State of Ethiopia-, laakiinse shacabka Soomaliyeed ee dalka iska leh oo dhiigooda uu wali u daadanayo qadiyada xoreynta dalka, xanuun gaar ah ayay u leedahay arintaasi. Ma garan karo inay sax tahay, waxaase hubaal ah, in sidaa loo dhigo (Somali regional State of Ethiopia), ay muujinayso u dhug la’aanta iyo ixtiraam darada qofka Somaliga ah taariikhdiisa amaba ay tahay dhaqanka reer-guuraanimo ee qofka Somaliga ah ku soo duxaya sikastoo aqoon uu u sheegto. Qofka reer-guuraaga ah dalkiisa waa kolba meesha ay xoolihiisa daaqaan/daaqayaan.